एल्ग्रा बनाम Zyrtec: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | अगस्ट 2021
कम्पनी, चेकआउट प्रेस चेकआउट समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार समुदाय समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एल्ग्रा बनाम Zyrtec: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
एल्ग्रा बनाम Zyrtec: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
यदि तपाईं एक million करोड अमेरिकीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जुन प्रत्येक वर्ष एलर्जीबाट ग्रस्त छ भने, तपाईंले आफ्नो स्थानीय फार्मेसीमा एलर्जीको बाटो तल हिंड्नु भएको हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै छन् विकल्पहरू कुन औषधि छनौट गर्ने भनेर जान्न गाह्रो छ।
एलेग्रा र जीरटेक दुई औषधी हो जुन एलर्जीको उपचारका लागि संकेत गरिन्छ। दुबै औषधिहरू ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छन् र ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) किन्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई H1 विरोधी, वा H1 ब्लकरहरू भनिने औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ, र तिनीहरूलाई नन्-सेडेटिंग एन्टीहिस्टामाइन्स पनि भनिन्छ। ती हिस्टामाइन को प्रभाव लाई रोक्दै काम गर्छन्। हिस्टामाइन एक रसायन हो जुन तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनेको छ र एलर्जन्सको प्रतिक्रियामा। यसले एलर्जीका लक्षणहरू निम्त्याउँछ, जस्तै नाक बग्ने, छींकने, र पानीदार, आँखाहरू। हिस्टामाइन ब्लक गरेर, यी औषधीहरूले एलर्जीका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
पुरानो ड्रग्स मनपर्दछ बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स भनेर चिनिन्छ र अधिक निन्द्राको कारण दिन्छ। एलेग्रा र जाइरटेक दोस्रो-पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सको रूपमा चिनिन्छन् र न-सिडेटिंग एन्टीहिस्टामाइन्सको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। जे होस् अझै पनि उनी निन्द्राको कारण हुनसक्दछ, तीनिहरु पहिलो पुस्ताको औषधि भन्दा कम तन्द्रा लगाउँछन्। दुबै औषधीहरू एन्टीहिस्टामाइन्स भनेर चिनिन्छन्, र ती यस्तै समान छन्, यद्यपि उनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्।
एलेग्रा र जीरटेक बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Allegra (फेक्सोफेनाडाइन) र Zyrtec (cetirizine) दुबै एन्टीहिस्टामाइन्स हुन् जुन ओन्डिसी ब्रान्ड-नाम र जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छन्। दुबै खुराकको प्राथमिकताका लागि विभिन्न ढाँचामा उपलब्ध छन्, जस्तै ट्याब्लेट र तरल फारम। Allegra र Zyrtec वयस्क र बच्चाहरू दुबै प्रयोग गरिन्छ। एलिग्राको विशिष्ट वयस्क खुराक दैनिक आवश्यकतानुसार १ 180० मिलीग्राम, वा mg० मिलीग्राम दैनिक रूपमा दुई पटक आवश्यक पर्दछ। Zyrtec को सामान्य वयस्क खुराक दैनिक आवश्यकताको रूपमा to देखि १० मिलीग्राम हो।
उच्च रगतमा चिनी पढ्नु भनेको के हो
Allegra र Zyrtec बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग H1 अवरोधक (एन्टीहिस्टामाइन) H1 अवरोधक (एन्टीहिस्टामाइन)
जेनेरिक नाम के हो? फेक्सोफेनाडाइन Cetirizine
औषधी कुन रूपमा आउँछ? ट्याब्लेट
स्यूडोफेड्रिनको साथ संयोजनमा पनि उपलब्ध छ, एक डिकन्जेस्टन्ट ट्याब्लेट
स्यूडोफेड्रिनको साथ संयोजनमा पनि उपलब्ध छ, एक डिकन्जेस्टन्ट
मानक खुराक के हो? वयस्कहरू: १ mg० मिलीग्राम दैनिक आवश्यकता अनुसार वा mg० मिलीग्राम दैनिक रूपमा दुई पटक
बच्चाहरू: उमेर अनुसार फरक हुन्छ वयस्क: दैनिक आवश्यकता अनुसार to देखि १० मिलीग्राम
बच्चाहरू: उमेर अनुसार फरक हुन्छ
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि / मौसमी आवश्यकता अनुसार छोटो अवधि / मौसमी आवश्यकता अनुसार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू; २ बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्कहरू; बच्चाहरु months महिना र माथिका
सर्तहरू एलेग्रा र Zyrtec द्वारा उपचार
Allegra र Zyrtec दुबै उपचार गर्न प्रयोग गरियो मौसमी एलर्जी लक्षण। एल्लेग्रा (एल्ग्रा के हो?) वयस्क र बच्चाहरूमा years बर्ष र सो भन्दा बढि उमेरकालाई संकेत गरिन्छ, र Zyrtec (Zyrtex के हो?) वयस्कहरू र २ बर्ष वा सो भन्दा बढि बच्चाहरूमा स indicated्केत गरिएको छ। दुबै औषधिहरू पित्ती (अर्टिकेरिया) को उपचारको लागि पनि संकेत गरिएको छ, तर विभिन्न उमेरहरूका लागि (तल चार्ट हेर्नुहोस्)। Zyrtec लाई months महिना र माथिका बच्चाहरूमा बारम्बार एलर्जीको लक्षणहरूको उपचारको लागि पनि संकेत गरीएको छ। बारहमासी एलर्जी वर्षको कुनै पनि समयमा हुन सक्छ र धूलो र मोल्ड सम्बन्धित छ। बच्चाहरूमा उचित खुराकको बारेमा तपाईंको डाक्टरसँग जाँच गर्नुहोस्।
सर्त एल्लेग्रा Zyrtec
वयस्कहरू र बच्चाहरूमा मौसमी एलर्जी राइनाइटिस लक्षणहरूको राहत हो वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु हो वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु
वयस्कहरू र बच्चाहरूमा पुरानो ईडिओपाथिक छालाको अनियन्त्रित छाला अभिव्यक्तिको उपचार हो वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु हो वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु
वयस्कहरू र6महिना र सो भन्दा बढि उमेरकामा बारहमासी एलर्जिक राइनाइटिस लक्षणहरू (धूलोकोट, पशुको छाला, र मोल्ड जस्ता एलर्जीको कारण) अफ-लेबल हो
Allegra वा Zyrtec अधिक प्रभावी छ?
TO अध्ययन मौसमी एलर्जीको साथ55 patients बिरामीहरूलाई हेर्नुभयो र दुई हप्ताको लागि दैनिक १leg० मिलीग्राम Zyrtec १० मिलीग्रामसँग एल्ग्राको तुलना गर्नुहोस्। दुबै औषधिहरू एलर्जीका लक्षणहरूको उपचारमा समान रूपमा प्रभावशाली देखिए, र एलिग्रा जिरटेक भन्दा कम तन्द्राको लागि फेला पर्‍यो।
अर्को अध्ययनले Zyrtec थियो भनेर देखायो Allegra भन्दा बढी प्रभावी , र ती साइड इफेक्टहरू समान थिए।
केहि मानिसहरु लाई एक को लागी अर्को को लागी एक प्राथमिकता छ, यद्यपि, यो केहि परीक्षण र त्रुटि लिन को लागी कुन औषधि तपाई को लागी अधिक प्रभावकारी छ को लागी लिन सक्छ। साथै, तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई कुन औषधि तपाईंको लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर छान्न मद्दत गर्न सक्छ।
कभरेज र Allegra बनाम Zyrtec को लागत तुलना
एलेग्रा र Zyrtec दुबै ब्रान्ड र जेनेरिकमा ओटीसी उपलब्ध छन्, ट्याब्लेट र तरलको रूपमा डोजिंग ढाँचाहरूको विभिन्न प्रकारमा। तिनीहरूलाई सामान्यतया बीमाले ढाक्दैन, किनकि तिनीहरू ओटीसी छन्, तथापि, केही सरकारी योजनाहरू (जस्तै राज्य मेडिकेडेड) ले एलिग्रा वा जीरटेकको लागि डाक्टरको पर्ची सहित तिर्न सक्छ। सामान्य leg०, १ 180० मिलीग्राम ट्याब्लेटको एलिग्रा खरीदको लागि लगभग $ २ cost लाग्न सक्छ, तर तपाईं जेनेरिक फार्म, फेक्सोफेनाडाइन पाउन सक्नुहुन्छ, le १२ को लागि एक सिंगलकेयर कूपनको साथ। त्यस्तै, # ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटको सामान्य Zyrtec खरीदको लागि सामान्यतया -30 २०--30० डलर लाग्न सक्छ तर डाक्टरले सिफारिस गरेमा सिंगलकेयरमा $ as सम्म कम खर्च हुन्छ।
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हैन हैन
मानक खुराक # ,०, १ mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू # ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत $ १२ $
प्रिस्क्रिप्शन छुट कार्ड
एलेग्रा बनाम Zyrtec का सामान्य साइड इफेक्टहरू
एल्लेग्रा र जाइरटेक प्रायः बिरामीहरूले सहन्छन्। Zyrtec को सबै भन्दा साधारण पक्ष प्रभाव उनी निन्द्रा हो। हुन सक्ने अन्य साइड इफेक्टहरूमा थकान, सुख्खा मुख र माथिल्लो श्वासप्रश्वासको संक्रमण समावेश छ। एलेग्राको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट भनेको टाउको दुख्ने, पछिल्लो श्वासप्रश्वासको संक्रमण, पीठ दुख्ने, थकान, उनीतपना, र मतली लाग्ने हुन्छ।
के तपाई ल्याक्टोज असहिष्णु हुन सक्नुहुन्छ केवल आइसक्रीममा?
अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि तपाईको एलर्जीस्ट वा अन्य स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
टाउको दुखाई हो १०..6% हैन -
माथिल्लो श्वसन पथ
संक्रमण हो 2.२% हो दुई%
ढाड दुख्नु हो २.8% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
थकान हो १.3% हो 9.9%
सुख्खा मुख हैन - हो %%
तन्द्रा हो १.3% हो ११-१-14%
मतली हो १.6% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
स्रोत: एफडीए लेबल (एलेग्रा) , एफडीए लेबल ( Zyrtec )
एल्ग्रा बनाम Zyrtec को ड्रग अन्तरक्रिया
एलेग्रासँग ड्रग अन्तरक्रिया धेरै कम छ। जब एरिथ्रोमाइसिन वा केटोकोनाजोलको साथ लिइन्छ, त्यहाँ एक अन्तर्क्रिया हुन्छ जुन शरीरमा एलेग्राको निर्माणमा परिणामित गर्न सक्छ, जसको मतलब बढी साइड इफेक्ट हुन सक्छ। एलेग्राले एन्ट्यासाइडहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, परिणामस्वरूप शरीरमा एलेग्राको मात्रा कम भयो (र प्रभावकारिता कम भयो)।
जाइरटेकले अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ जसले सुस्तता निम्त्याउँदछ, जस्तै पेन्किलर, एन्टीडिप्रेससन्ट, वा चिन्ता वा निद्राका लागि प्रयोग गरिएका औषधीहरू, साथै रक्सी वा गाँजा (भांग)।
औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको सल्लाह लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास एल्लेग्रा Zyrtec
एरिथ्रोमाइसिन म्याकोराइड एन्टिबायोटिक हो हैन
निजोरल (केटोकोनाजोल) Azole antifungal हो हैन
Rolaids एन्ट्यासिडहरू हो हैन
भांग ड्रग्स जुन उनी निन्द्रा को लागी रेकर्ड गरिएको छैन, तर सम्भाव्य रूपमा हो
Allegra र Zyrtec को चेतावनी
एलेग्रा एक गर्भावस्था कोटि सी हो, र जाइरटेक एक गर्भावस्था कोटि बी हो। किनकि गर्भवती महिलाहरुमा औषधी पर्याप्त मात्रामा अध्ययन गरिएको छैन, यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने एलेग्रा वा जीरटेक प्रयोग गर्नु अघि तपाईको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
65 65 बर्ष वा माथि उमेर र / वा मृगौला समस्या भएका बिरामीहरूले एलेग्रा वा जीरटेक प्रयोग गर्नु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ।
अंगूर वा अंगुरको रस सक्छ केहि औषधिहरु संग कुराकानी । Allegra केवल अंगूर को रस तर सुन्तला वा स्याउ को रस संग कुराकानी गर्न सक्दैन। यी फलहरूले तपाईंको शरीरमा एल्लेग्राको मात्रा कम गर्दछ, औषधि कम प्रभावकारी बनाउँदछ। पानीको साथ Allegra लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
जब Zyrtec लिने सावधानी प्रयोग जब ड्राइभिंग वा अपरेटि machinery मेशिनरी। Zyrtec रक्सी, मारिजुआना, वा अन्य औषधीहरू जसले बेहोस पार्ने कारणहरू प्रयोग नगर्नुहोस् किनभने संयोजनले CNS कमजोरी बिगार्न सक्छ।
एलेग्रा बनाम Zyrtec बारे प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
Allegra के हो?
एलेग्रा, जेनेरिक नाम फेक्सोफेनाडाइनबाट पनि चिनिन्छ, एक एन्टीहिस्टामाइन हो जुन एलर्जीको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ।
Zyrtec के हो?
Zyrtec एक antihistamine एलर्जी को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ। Zyrtec को जेनेरिक नाम cetirizine हो।
Allegra र Zyrtec समान छ?
होईन, जबकि दुबै औषधि एन्टीहिस्टामाइन्स हो, उनीहरूसँग केही भिन्नताहरू जस्तै साइड इफेक्टहरू, लागुपदार्थ अन्तर्क्रिया, र चेतावनीहरू (माथि उल्लेखित) छन्। तपाईंले सुन्नुहुने अन्य लोकप्रिय एन्टीहिस्टामाइन्समा बेनाड्रिल (डाइफेनहाइड्रामिन), क्लेरटिन (लोराटाडाइन), र जाइजाल (लेभोसेर्टिजाइन) समावेश छन्।
के Allegra वा Zyrtec राम्रो छ?
अध्ययनले दुबै औषधि प्लेसबोभन्दा राम्रो देखाउँदछ र बिभिन्न प्रमाणले देखाउँदछ कि एलेग्रा र जीरटेक समान रूपले प्रभावकारी छ वा जीरटेक थोरै राम्रो हुन सक्छ। जे होस्, साइड इफेक्ट पनि फरक-फरक हुन्छन् र एक एलर्जी औषधि छान्दा ध्यानमा राख्नु पर्छ।
के म गर्भवती भएको बेला एलेग्रा वा जीरटेक प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भावस्थामा एलेग्रा वा Zyrtec को प्रयोग को बारे मा आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै Allegra वा Zyrtec लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर फेला पार्नुभयो भने, आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म एल्ग्रा वा Zyrtec रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीले Allegra वा Zyrtec का साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ, जस्तै चक्कर, निन्द्रा, वा अशक्तता। यो Allegra वा Zyrtec लिँदा रक्सीबाट जोगिन सिफारिस गरिन्छ।
के म Zyrtec र Allegra सँगै लिन सक्छु?
एलर्जी औषधिहरूको संयोजन सधैं राम्रो विचार हुँदैन। जबसम्म तपाइँको डाक्टरले तपाईलाई अन्य कुरा नगरेमा, एक उचित एलर्जी औषधि छान्नु र निर्देशन अनुसार लिनु उत्तम हुन्छ।
कुन एन्टीहिस्टामाइन उत्तम छ?
त्यो निर्भर छ। केही बिरामीहरूले कसम खान्छन् एल्लेग्रा , जबकि अन्य प्रेम Zyrtec । अन्य गैर-मोहक एन्टीहिस्टामाइन्सहरू जस्तै क्लारिटिन र जाइज़ल धेरै लोकप्रिय पनि छन्। यसले कम से कम प्रभाव पार्ने क्रममा कुन एन्टिहिस्टामाइनले तपाईंको लक्षणहरूलाई सबैभन्दा बढी मद्दत गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन केही बेर परीक्षण र त्रुटि लिन सक्छ।
कती सिरपमा कति मदिरा हुन्छ
के Zyrtec ले रक्तचाप बढायो?
जीरटेक एक्लो रक्तचाप बढाउँदैन, तथापि, जीरटेक-डी (र यसको जेनेरिक) ले स्यूडोफेड्रिन समावेश गर्दछ, जसले रक्तचाप बढाउन सक्छ। तपाईंको फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईंलाई एन्टिहिस्टामाइन उत्पादन छनौट गर्न मद्दत चाहिन्छ कि एक डिकन्जेस्टन्ट समावेश गर्दैन।
के यो Zyrtec रातमा वा बिहान लिनु राम्रो हो?
Zyrtec को एक खुराक २ 24 घण्टा सम्म रहनेछ, ताकि तपाईं यसलाई दिनको कुनै पनि समय लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि Zyrtec ले तपाईंलाई निन्द्रा महसुस गराउँछ, तपाईं सुत्ने समयमा यसलाई लिन कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ।
Zyrtec लिने दीर्घकालीन प्रभावहरू के हुन्?
Zyrtec लेबलिंग जानकारी मा लामो अवधिको उपयोग मा जानकारी छैन। थप जानकारीको लागि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
फ्लू मौसम तपाईं तल? एकलकेयरको साथ Tamiflu लागतहरूमा बचत गर्नुहोस्
तपाईं मांसपेशी आराम गर्ने संग aleve लिन सक्नुहुन्छ
के2आईबुप्रोफेन 800०० मिलीग्राम लिन ठीक छ?
कानमा तरल पदार्थ सुकाउन के लिने
द्रुत तरीकाले तुरून्त रक्तचाप कम गर्न
के म एकै साथ टाईलेनॉल र आईबुप्रोफेन लिन सक्छु?
जन्म नियन्त्रण को लागत को बीमा बीमा छैन